स्वास्थ्य/जीवनशैली Archives - Darsan Post
१२ कार्तिक २०७७, बुधबार २०:४८ Dpost150LeaveaComment on कोरोनासँग जुध्नका लागि उपवास लाभदायक होला ?
वैश्विक महामारीको रुपमा देखापरेको कोरोना भाइरस विरुद्ध औषधि एवं खोप बनाउने काममा संसारभरका प्रयोगशालामा अनेकन अनुसन्धान भइरहेका छन् । यद्यपि अहिलेसम्म त्यसबाट भरपर्दो नतिजा प्राप्त भएको छैन । अर्कोतर्फ कोरोना भइरस पूर्णत नियन्त्रणमा आउने छाँट छैन । यस्तो पृष्टभूमीमा हामीसँग सीमित विकल्प छन् । पहिलो विकल्प, जतिसक्दो सुरक्षाका विधीहरु अपनाउने ताकि कोरोना भाइरसको संक्रमण नहोस् […]
१२ कार्तिक २०७७, बुधबार २०:३२ Dpost96LeaveaComment on तपाईं शाकाहारी कि मांसाहारी ? शाकाहारी बन्नुका फाइदा यी हुन्
भोजन हाम्रो दैनिक जीवनको अभिन्न अंग हो । प्रत्येक व्यक्तिअनुसार भोजनको प्रकृति फरकफरक हुन्छ । कोही मांसाहारी हुन्छन् भने कोही शाकाहारी । भोजनको उद्देश्य नै शरीरमा पोषण पुगोस् भन्ने हो । भोजनले शरीरबाट रोगहरू भगाउने अपेक्षा गरिनछ । यस्ता गुण शाकाहारी भोजनमा पाइन्छन् । शाकाहारी भोजनले मानिसलाई ऊर्जावान् र निरोगी बनाउँछ । बाकी जानकारी यहाबाट
जानी राखौं, यस्तो फाइदा हुन्छ अदुवाबाट
१२ कार्तिक २०७७, बुधबार १३:३५ Dpost135LeaveaComment on जानी राखौं, यस्तो फाइदा हुन्छ अदुवाबाट
अदुवामा औषधीय गुण हुन्छ। यसमा आइरन, क्याल्सियम, आयोडिन, भिटामिनलगायत पोषक तत्‍व पाइन्छन्। – अदुवाको सेवनले छाला आकर्षक र चम्किलो बन्छ। बिहान खाली पेट एक गिलास मनतातो पानीसँग एक टुक्रा अदुवा खानुपर्छ। – खोकीमा पनि अदुवा लाभकारी छ। अदुवाका स–साना टुक्रा पारी महसँग मिसाई तताउने। दिनको दुई पटक यो मिश्रण सेवन गर्ने। –अदुवाको नियमित सेवनले भोक […]
ह्याङओभरः भ्रम र यथार्थ
१२ कार्तिक २०७७, बुधबार १०:३९ Dpost141LeaveaComment on ह्याङओभरः भ्रम र यथार्थ
पछिल्ला दिनमा मानिसको रोजाइमा छ, मदिरा । दुःख बिर्सिने र खुशी बाँड्ने बहाना पनि बनेको छ, यो । दुवै अवसरमा मदिराको अत्यधिक सेवन गर्ने प्रवृत्ति छ, जसका कारण टाउको दुख्ने, रिंगटा लाग्ने, वान्ता हुने, मुख सुक्नेलगायत समस्या उत्पन्न हुन्छ । त्यसलाई बोलीचालीमा ‘ह्याङओभर’ भन्ने गरिएको छ । भ्रमः ह्याङओभर सामान्य हो । यथार्थः अत्यधिक मदिरा सेवनका कारण […]
११ कार्तिक २०७७, मंगलवार १३:०७ Dpost169LeaveaComment on उफ् मोटोपन ! घट्दै–घटेन
मोटोपन बढ्नुमा केही कुरा जिम्मेवर हुन्छ । जस्तो, ऐशआरमपूर्ण जीवन । अत्याधिक र जथाभावी खानपान । मदिरा र मासुजन्य पर्दाको अधिक सेवन । वंशानुगात । मोटोपन भएमा के हुन्छ ? मोटोपन बढ्नुमा केही कुरा जिम्मेवर हुन्छ । जस्तो, ऐशआरमपूर्ण जीवन । अत्याधिक र जथाभावी खानपान । मदिरा र मासुजन्य पर्दाको अधिक सेवन । वंशानुगात । […]
१५ श्रावण २०७७, बिहीबार १२:०९ Dpost276LeaveaComment on भिटामिन डिको कमी हुँदा कोरोनाको जोखिम बढी
कोरोना भाइरसको सक्रमण प्रतिदिन बढ्दो छ । यसलाई पूर्णत नियन्त्रण गर्ने प्रयासहरु अहिलेसम्म सफल भइसकेको छैन । वैज्ञानिकहरु कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप एवं औषधिको खोजमा जुटेकमा छन् । त्यसो त विश्वमा जति व्यक्ति कोरोनाबाट प्रभावित भएका छन्, त्यसमध्ये अधिकांश निको भएर घर फर्किएका छन् । कतिपयले भने कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाइरहेका छन् । आवश्यक सर्तकता […]
३ चैत्र २०७६, सोमबार १३:१६ Dpost717LeaveaComment on होम क्वारेन्टाइनमा बस्दा पालना गर्नुपर्ने १५ नियम
काठमाण्डाै – सरकारले विदेशबाट फर्किएका सबै नेपालीलाई १४ दिनसम्म घरमा छुट्टै बस्न अर्थात होम क्वारेन्टाइनमा रहन अनिवार्य गरेको छ । कोरोनाको लक्षण १४ दिनभित्र देखिने र सङ्क्रमित व्यक्तिमा लक्षण नदेखिइकनै उसको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिमा सर्ने जोखिम हुने भएकाले विदेशबाट फर्किएकालाई १४ दिन आफ्नै घर वा होटलमा छुट्टै बस्न अनिवार्य गरिएको हो । विदेशबाट फर्कनेलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय […]
१ चैत्र २०७६, शनिबार २०:२१ Dpost580LeaveaComment on कुनै पनी केटालाई फेसबुकबाट चिनेकै भरमा विश्वास गरी आफ्नो इज्जत लिलाम नगर्नुस् दिदीबहिनीहरु
महिला अधिकारकर्मी तथा चर्चित संचारकर्मी महिला सरु सुनारले पछिल्लो समयमा आफ्नो सामाजिक संजाल मार्फत फेसबुकबाट वैदेशिक रोजगारीको सिलशिलामा विदेश जानी दिदिबहिहरु अर्को देशमा रहने केटाहरुको विस्वासमा परि नजिकिदा केटाहरुले नाजायज फाइदा उठाई उनीहरुको फोटोहरु भिडियोहरु फेक आइडी या युबटुबमा अपलोड गरि ब्यालेकमेल गरेको घटना आफुलाई दिन दिनै आउने गरेको बताएकी छिन र दर्जनौ यस्ता आइडीहरु बन्द […]
नेपालमा यस्ता कारण कोरोना नफैलिने हुन सक्छ।
१ चैत्र २०७६, शनिबार २०:०८ Dpost425LeaveaComment on नेपालमा यस्ता कारण कोरोना नफैलिने हुन सक्छ।
सारा विश्व कोरोनाबाट आ’तङ्कित भइरहेको बेला नेपाली किन ढुक्क छन् त भन्ने कुराको कुनै आधार छैन, तर केही संयोग र नेपालको जनसाङ्ख्यिक स्थिति हेर्दा नेपाली नागरिक कोरोनाबाट धेरै आ’तङकित भइहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण र सुखद कुरा त छिमेकी देश चीनको वुहानबाटै ल्याइएका कसैलाई पनि कोरोना सङ्क्रमण देखिएन । वुहानबाट सुरु भएर विश्वका […]
३० फाल्गुन २०७६, शुक्रबार २१:११ Dpost317LeaveaComment on पैसाबाट झन धेरै सर्छ भाइरस, पैसालाई सकेसम्म मुखको सम्पर्कमा लानुहुँदैन : डा. शेरबहादुर पुन
चीनबाट उत्पन्न भएको कोरोनाभाइरस अहिले विश्वभर फैलीसकेको छ। भाइरसबाट बच्न विश्वभर अनेकथरि उपाए अपनाउन थालिएको छ। भाइरसबाट आफ्नो सुरक्षा गर्न मुखमा लगाउने मास्क र हातमा लगाउने पन्जाको प्रयोग गर्नेहरुको संख्या अत्यधिक बढेको पाइन्छ। तर, भाइरस नोटबाट पनि सर्छ भनेर त्यतातिर सतर्कता अपनाएको भने कमै देखिन्छ। केही समय पहिले नयाँपत्रिकामा सरुवारोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनको भनाइ […]